Ndeapi Mhedzisiro YeSocial Media Kushambadzira? | Martech Zone
Ndeapi Mhedzisiro YeSocial Media Kushambadzira?
China, July 1, 2021 China, July 1, 2021 Douglas Karr
Chii chinonzi social media kushambadzira? Ndinoziva izvozvo zvinonzwika semubvunzo wepakutanga, asi zvinokodzera imwe hurukuro. Pane zvimiro zvinoverengeka kune yakakura yemagariro midhiya kushambadzira zano pamwe nehukama hwayo hwakapindirana kune mamwe magero echannel senge zvemukati, kutsvaga, email uye nhare.
Ngatidzokerei kutsananguro yekutengesa. Kushambadzira chiito kana bhizinesi rekutsvaga, kuronga, kuita, kusimudzira uye kutengesa zvigadzirwa kana masevhisi. Zvemagariro midhiya inzira yekutaurirana inoita kuti vashandisi vagadzire zvemukati, vagovane zvemukati kana kutora chikamu musocial network. Zvemagariro midhiya svikiro zvakasiyana zvakanyanya kubva kuchinyakare midhiya nekuda kwezvikonzero zviviri. Kutanga, chiitiko ichi chakanyanya kuruzhinji uye chinowanikwa kune vashambadzi vekutsvaga. Chechipiri, iyo svikiro inobvumidza bi-inotungamira kutaurirana - zvese zvakanangana uye zvisina kunangana.
Kune 3.78 bhiriyoni venhau vashandisi venhau pasirese uye nhamba iyi iri kungoenderera mberi ichikura pamusoro pemakore mashoma anotevera. Sezvazvinomira, izvo zvinoenzana neinenge 48 muzana yeiyo huwandu hwenyika hwazvino.
Chii chinonzi Social Media Kushambadzira?
Simba rakasimba rezvenhau kushambadzira rinofanira kusanganisira zvese zvakasarudzika zvemagariro enhau pamwe nekusimudzira nzira dzinogona kutariswa nekusimudzirwa nemuchina. Izvi zvinoreva kuti kuve nezano rekusundira maTweets maviri pazuva hakusi kuzara kwakazara nzira yemagariro enhau. Zano rakazara rinosanganisira maturusi uye nzira dzekuita ku:
Market Research - Kuunganidza ruzivo kuti unyatso tsvagisisa uye unzwisise uye kutaurirana nevateereri vako.
Kuteerera Kwemagariro - Kuongorora uye kuita kune zvinonanga zvikumbiro kubva kune vateereri vako, kusanganisira vatengi kana zvikumbiro zvekutengesa.
Reputation Management - Kuchengetedza uye kugadzirisa rako pachako kana zita rechiratidzo, kusanganisira kuongorora kuongorora, kuunganidza, uye kutsikisa.
Kudhindisa Zvemagariro - kuronga, kuronga, uye kutsikisa zvemukati zvinopa ruzivo uye kukosha kune vako vangangove vatengi, kusanganisira maitiro-kune, zvipupuriro, hutungamiriri hwekufunga, kuongorora zvigadzirwa, nhau, uye kunyangwe varaidzo.
Social Networking - kushingairira kuita marongero anokura kusvika kwako kune vanokurudzira, tarisiro, vatengi, uye vashandi.
Kukurudzira Kwemagariro - Zvirongwa zvekusimudzira zvinotyaira mhedzisiro yebhizinesi, kusanganisira kushambadzira, kupihwa, uye kukurudzira. Izvi zvinogona kuwedzera mukutsvaga nekuhaya vanokurudzira kuti vawedzere kukwidziridzwa kwako kunetiweki.
Mhedzisiro yemabhizinesi haifanire kunge iri yekutenga chaiyo, asi inogona kuvaka kuvaka, kuvimba, uye masimba. Muchokwadi, zvemagariro enhau dzimwe nguva haisi yakanakira svikiro kutyaira kwakananga kutenga.
73% yevatengesi vanotenda kuti kuyedza kwavo kuburikidza neyekushambadzira midhiya yenhau kwave kwakamboshanda kana kubatsira pabhizimusi ravo.
Zvemagariro enhau zvinowanzo shandiswa kuwana neshoko remuromo, sosi yekukurukurirana kwekutsvaga, uye sosi yekubatanidza - kuburikidza nevanhu - kukambani. Nekuti iri bi-inotungamira, yakasarudzika kubva kune dzimwe nzira dzekutengesa.
71% yevatengi vakave neruzivo rwakanaka nechiratidzo pasocial media vangangokurudzira rudzi urwu kushamwari uye mhuri.
maonero Martech Zone'S Social Media Statistics Infographic
Yemagariro Midhiya Mediums uye Muenzaniso Unoshandisa
54% yevashandisi venhau vanoshandisa vezvenhau kutsvagisa zvigadzirwa.
Market Research - Ndiri kushanda nemugadziri wekupfeka izvozvi uyo ari kuvhura yavo yakananga-kune-mutengi brand online. Tiri kushandisa kuterera munharaunda kuti tione mazwi akakosha anoshandiswa nevatengi pavanenge vachitaura nezvevanokwikwidza vepamusoro kuti tikwanise kuisa mazwi aya mukuyedza kwedu kwekumaka.
Kuteerera Kwemagariro - Ndine chenjedzo dzakagadzirirwa yangu yemhando uye ino saiti kuitira kuti ndione zvandinotaura online uye ndigone kuvapindura. Haasi munhu wese anomaka mucherechedzo, saka kuteerera kunokosha.
Reputation Management - Ndine maviri emuno mabhurani andiri kushanda nawo atakagadzira otomatiki ekudzokorora zvikumbiro zvevatengi vavo. Ongororo yega yega inounganidzwa uye inopindurwa, uye vatengi vanofara vanosundirwa kuti vagoverane zvavo ongororo pamhepo. Izvi zvakatungamira mukuwedzera kuoneka mumhedzisiro yekutsvaga.
Kudhindisa Zvemagariro - Ini ndinoshanda nemakambani akati wandei ayo anochengeta zvemukati makarenda uye anoisa pakati pavo kuronga maitiro mukati Agorapulse (Ndiri mumiriri). Izvi zvinovachengetera toni yenguva nekuti ivo havafanirwe kuenda kunze uye maneja ese masvikiro zvakananga. Isu tinopinza mushandirapamwe weUTM kumaka kuitira kuti tikwanise kuona mashandiro enhau enhau ari kutyaira traffic uye shanduko kudzokera kunzvimbo yavo.
Social Networking - Ndiri kushingairira kushandisa chikuva chinondibatsira kuziva nekubatana nevanokurudzira nemasangano anogona kundibatira paLinkedIn. Yakave nekukanganisa kwakakura pamikana yangu yekutaura uye yakabatsira kambani yangu kukura kutengesa kwayo.
Kukurudzira Kwemagariro - Vazhinji vevatengi vangu vanosanganisira vezvenhau kushambadzira kana ivo vari kusimudzira zviitiko, webinars, kana kutengesa. Iwo anoshamisa anotarisana neaya mapuratifomu ekupa anopa anoshamisa anobatsira.
Ndinoona kuti iwe unogona kuvaka mamwe akaomesesa ezvemagariro macampaign ayo anosanganisira mashandisiro uye masvikiro munzira dzisingaenderane nesarudzo dzangu pamusoro. Ndiri kungokanda kumwe kushandiswa kwese kwese kwemasvikiro kupa ruzivo rwekuti vangashandiswa sei zvakasiyana.
Vatengesi vazhinji vanowanzo tenderera kuenda kune inotonhorera svikiro kana iyo yavanonyanya kugadzikana nayo. Iyi tsaona yakamirira kuitika nekuti ivo havasi kuenzanisa kana kusanganisa masvikiro kune kwavo kuzere kugona.
Mashandisiro Ari kuita Mabhizimusi Social Media
Ratidza chiratidzo chako - izwi remuromo rinoshanda zvakanyanya nekuti rinonyanya kukosha. Vanhu vari mune yakatarwa indasitiri, semuenzaniso, vanowanzo kuungana munzanga enhau midhiya uye mapoka. Kana munhu mumwe achigovana marashi yako, chigadzirwa kana sevhisi, inogona kuonwa uye kugoverwa nevateereri vane hushamwari.
Gadzira nharaunda yakatendeka - kana iwe uine nzira inoshanda yemagariro ekupa kukosha kune vateereri vako - kungave nerubatsiro rwakananga, zvemukati zvakarongedzwa, kana imwe nhau, matipi uye matipi, nharaunda yako ichawedzera kukuonga uye kuvimba newe. Kuvimba nechiremera zvinhu zvakakosha zvechero sarudzo yekutenga.
Natsiridza vatengi - kana mutengi wako achikusheedza kuti ubatsirwe, inhaurwa 1: 1. Asi kana mutengi akasvika pasocial media, vateereri vako vanosvika pakuona maitiro aunoita nekupindura zvavanoda. Kubata kukuru kwevatengi kunogona kutaurwa kuburikidza nekona yega yega yepasi… uye nekudaro nharaunda yevatengi njodzi.
Wedzera kujekesa kwedhijitari - nei zvigadzirwa zvemukati pasina zano rekugovana uye kusimudzira? Kuvandudza zvemukati hazvireve kana ukaivaka, vachauya. Havadaro. Saka kuvaka huru pasocial network uko nharaunda kuve vatsigiri vechiratidzo ine simba rinotyisa.
Kuwedzera traffic uye SEO - Kunyange injini dzekutsvaga dzichiri kuramba dzichisarudzika, mafeni uye vateveri sechinhu chakanangana nematanho ekutsvaga, hapana mubvunzo kuti yakasimba yemagariro midhiya zano ichatyaira yakakura yekutsvaga injini mhedzisiro.
Wedzera kutengesa uye kusvika kune vateereri vatsva - zvinoratidzwa kuti vatengesi vanhu vanosanganisira vezvenhau zano zano kunze avo vasina. Zvakare, vatengesi vako vanhu vanonzwisisa maitiro ekuita neyakaipa mhinduro mune yekutengesa maitiro nekuti ivo vanotaura chaizvo kune vanhu mazuva ese. Dhipatimendi rako rekushambadzira kazhinji haridi. Kuisa vamiririri vako vekutengesa kunze kwenzanga kuvaka hupo inzira inotyisa yekuwedzera kusvika kwako.
Cheka kushambadzira mutengo - nepo ichida kumhanyisa, kukura kunoenderera pasocial media zvinotevera, zvikamu, uye mabhatani anozopedzisira adzikisira mitengo pachinowedzera kudiwa. Kune nyaya dzinoshamisa dzekambani dzinoenda kubva pakatyoka kusvika pakuwedzera mushure mekuvaka yakasarudzika yemagariro midhiya. Izvo zvinoda zano rinogona kupesana netsika dzakawanda dzemakambani. Kune zvakare akawanda makambani anotyisa pasocial media uye arikungotambisa nguva yavo.
49% yevatengi vanoti vanovimba nemasimba ekukurudzira pasocial media kuti vazivise sarudzo yavo yekutenga.
Mukati meumwe neumwe weiyi mune nzira dzekuwedzera kutora uye kuchengetwa kwevatengi vako pamwe nekutovasimudzira parwendo rwevatengi.
Mhedzisiro yeSocial Media
Kunyangwe ini ndisingagare ndichimanikidza vatengi vangu kuti vanyatsoisa mari mumaitiro ese enhau, ini ndinoona ichidzokerwa mukudyara kana vatengi vangu vakagadzirisa mukurumbira wavo uye vachivaka kukosha nevateveri vavo online. Chero zvazvingaitika, kushaya hanya nesimba renhau rezvemagariro kunogona kuve panjodzi yechiratidzo kana ikatadza kubata nyaya yebasa revatengi. Vatengi vako vari kutarisira kuti iwe uvepo uye upindure nenzira inokodzera pane akakosha magariro enhau mapuratifomu… kusanganisa maturusi uye marongero ekuita izvi zvakakosha.
Tags: FacebookFacebook Kushambadziralinkedin marketingkutsvakurudza misikamukurumbira pamhepoPinterestmbirikiromukurumbira manejimendiReviewskutarisana nevanhusocial media advertisingpasocial media chinangwaSocial Media Marketingkusimudzira vezvenhaumagariro enhaupasocial networkkusimudzira munharaundakutsikisa munharaundaTikTokyoutube kushambadzira
Infographic: 21 Yemagariro Midhiya Statistics Iyo Yega Mamaki Meter Inoda Kuziva Muna 2021
Zvepamusoro Zvinhu Zvekubudirira Nesimba App Push Chiziviso Engagement
Jan 6, 2009 pa 7: 38 AM
Ini handina kukwanisa kubvuma zvimwe, ini ndaiwanzove ndiri kumafaro ndichiedza kumisikidza vhidhiyo yangu basa kune vaimbi! Uye kunyangwe dai vaifarira, vanga vasiri pamaonero akanaka, kwete senge pavanenge vari online vowana yangu saiti vobva vatora imwe nguva vachitarisa kubasa kwangu, ikozvino vatengi vanondibata.
Kusvika pakushandisa vhidhiyo kuzviita iwe pachako, zviri nani kungoomerera kunyorera zvinyorwa zvemashoko asinganzwisisike kana iwe unofunga kuvhota izano rakanakawo?
Jan 6, 2009 pa 8: 09 AM
Ndatenda! Zvakanakira kublogi nevhidhiyo kuti upe mazwi ekutsvaga zvinongokunda mubhuku rangu. Vashoma vevanhu vanoshandisa kutsvaga kwevhidhiyo - uye mukati meavo, vazhinji havatore nguva yekutsanangudza vhidhiyo.
Kubatanidza izvo zviviri kune simba asi zvinotora nguva yakati rebei, hazvo. Kugona kuburitsa Vhidhiyo Blog (Podcastable), UYE blog nezve vhidhiyo yega yega ichavandudza mikana yako yekuwanikwa!
Jan 7, 2009 pa 12: 29 AM
Yakakura posvo Doug. Ndakaona vazhinji varidzi vebhizimusi vakazvimiririra vachishandisa zvisirizvo netiweki. Iyo haisi kungoita kunge spam, asi inonhuwa nezve yakachipa spam. Maitiro ari nani kutora nguva yekuvaka zvemukati zvemukati (blog yakanaka sarudzo), gadzira hunyanzvi, ratidza kugona kwako mune rako basa, uye kuhwina mitsva yekutsvaga.
Jan 7, 2009 pa 7: 42 AM
Doug ichi chihombe chinyorwa. Seyakasiyana webhu kambani webhu, isu tiri kugara tichiedza kutsvaga nzira nyowani dzekushandisa pasocial media kuwedzera zvinobudirira kutengesa kwedu uye kushambadza chinzvimbo. Ini ndinofunga iwe unorova pane akasimba akakosha akakosha mapoinzi nezvekushandisa zvisirizvo zvemagariro media, zvinhu zvandinofunga kunyangwe nyanzvi dzinofanira kuchengeta mundangariro.